Yohlobo lweToyota Corolla E120 ingenye izimoto Japanese ethandwa kakhulu futhi uthenge. Abantu abaningi bathi kuyinto izinga, ungalokothi imishini sephulwe. Nokho, uma le imodeli uyathandwa, kuyafaneleka ngakho futhi zako ezisemqoka ukutshela.
Inzuzo enkulu imodeli lweToyota Corolla E120 kuyinto imishini yayo. Uhlu imishini ihlanganisa konke okudingayo. Lokhu conditioning air, electronic drive ohlangothini izibuko, isondo adjustable eziqondisa thwi, amafasitela amandla, ohlelweni anti-lock ne-airbag amabili. Lutho engavamile, kodwa lezi zici ukunikeza abalandeli "Toyota" induduzo.
Ngo-2002-ke kwavele umsebenzi othile restyling. Ngemva kubo, imoto baba umnikazi "fresh" Ingaphakathi nengaphandle. Futhi kusukela ngaleso sikhathi emakethe yasekhaya waqala ukuthengisa ukuguqulwa kunazo elula ukudluliswa manual 1.3-litre engine ngaphansi hood.
Kwakukhona ngaphezulu "ocebile" Ushintshe yohlobo lweToyota Corolla E120. Babizwa ngokuthi bangabantu "edition elinganiselwe". Lokho eseduze kuya uqobo. Yayiyini izinzuzo? idrayivu elekthronikhi esihlalweni evuthayo yokushayela, okuhle CD-player, i-navigation system yesimanje, multi-umbala kwesikrini, nokunye. N. Ukuze ukucushwa ngamunye umkhiqizi uye walungiselela ezimbili izinhlobo yokudlulisela. Eyokuqala - a-band 5 "Mechanics" (ngaphandle kwaba oyisibonelo iyunithi 1.8-litre ngaphansi bonnet) kanye 4-speed automatic transmission.
Njengoba nawo wonke amamodeli yangaphambilini ye-Toyota Corolla E120, inguqulo ephezulu ekupheleni sisenza nge izinjini ezahlukene. Futhi - isizukulwane esisha amandla amayunithi. Phakathi kwabo - izinjini ezintathu egijima ku uphethiloli (4 DOHC). Lokhu 88-, 110--136-eqinile lokubolekwa, ivolumu yabo kwaba 1.3; 1.5 1.8 amalitha, ngokulandelana. Omunye umthengi ezingaba inikezwa yohlobo lweToyota Corolla IX E120 nge asemkhathini 2.2-litre udizili. Wayengase ukukhiqiza amandla 79 "amahhashi".
Japanese - hhayi abalandeli pretentiousness. Futhi lesi sici kuwo bubonakala ngokucacile umhlobiso angaphakathi "Corolla" 2013 ukukhululwa. Manje - isikhathi lapho umhlaba abakhiqizi adumile ungalilahli izimoto, nezinto zobuciko. Lokho kuphela emaqaqasini izimoto kusuka Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Audi, BMW, Ferrari ... benjalo omkhulu! Kodwa ngaphakathi "Corolla" konke kalula futhi ngobuhlakani. Salon elula, akungabazeki, kodwa evamile. Izinto - plastic, nakuba izinga. Nakuba, uma umuntu efuna ukuba ngumnikazi we ukucushwa esiphezulu, uzophila imoto nge lesikhumba ingaphakathi, ezimbili-zone ekulawuleni isimo sezulu kanye omuhle multimedia uhlelo.
Powertrains ubudala futhi izizukulwane ezintsha - uyini umehluko?
Umehluko omkhulu phakathi uphethiloli izinjini ezintsha kusukela isizukulwane esedlule sakwa-izinjini kuyinto eziqinile uchungechunge drive isikhathi.
Nokho eziningi abayinakanga Onjiniyela leso sici, njengoba izinjini ukonga imvelo. Wonke umuntu uyazi ukuthi Japanese ukukhuthalele iqophelo nokuqinisekisa ukuthi izinjini kudle fuel kancane futhi wenza ekushayweni qeda ubuncane emkhathini. Okuningi yabalelwa kuya phambili nesimanje - ochwepheshe wadala ngamabomu amayunithi nge amathemba. Futhi, onjiniyela lincishisiwe injini isisindo. Futhi ngenxa yalesi anda okuthiwa amandla ethize.
Noma kunjalo, kwakungeyona ngaphandle amaphutha. Ngeshwa, izinjini ezintsha yohlobo lweToyota Corolla E120 libuyekeza kusukela baxgeki babengesibo omuhle ngokuphelele. Futhi zonke ngoba banayo maintainability kancane kakhulu futhi izimfuno eliphezulu izinga uphethiloli nowoyela. Ngakho-ke, uma umuntu efuna "yensimbi ihhashi" yakhe usekhonze kuye isikhathi eside, udinga azibukisise ngemva injini. Kungenjalo ukunganaki kuzoholela ukulungiswa ebizayo.
Yohlobo lweToyota Corolla E120, okuyinto isithombe kusibonise imoto impela, ahlotshiswe bendabuko design Japanese iqembu, ezahlukene izinga ukumiswa. Linikeza izinga ehloniphekile wenduduzo nokulawula. Lokhu kwenzeka naphezu kokuba iqiniso ukuthi uyakwazi ukubhekana nezimo ezinzima ngendlela emangalisayo. Ngisho noma usebenzisa umshini nemibandela imigwaqo yethu Russian.
Nokuningi izinzuzo kungenziwa ngokuphepha bathi le kalula yesondlo nokutholakala izingxenye ezisele. Yiqiniso, kungaba ngcono uma sasingekho isidingo ngenxa yokugcina, kodwa, ngeshwa, akukho umonakalo akabusi.
Ukushayela ukusebenza, handling nokuphepha
Lokhu kubuye i ndaba ebalulekile, okuyinto ngempela kufanele sinake, ukhuluma ngani yohlobo lweToyota Corolla IX (E120, E130). Ngokuhlanganyela wonke-wheel drive (onobuhle zinjalo izinguqulo nge automatic transmission - noma 1.5 noma 1.8), umshini ivumela umshayeli ukuba azethembe beshayela, ephephile futhi zikhululekile. Futhi kufanele kuphawulwe ezithambile ukubopha uhlelo (okuyinto, by the way, bekulokhu isici sici "Toyota"). Uma siqhathanisa imoto nge ezazingaphambi kwayo, nokuchilizela engaba, ngeshwa, cishe enjalo. A ipharamitha, phakathi kwezinye izinto, ezibalulekile, ikakhulukazi uma kuziwa ezindaweni zasemadolobheni.
Manje mayelana nokuvikeleka. Lapha, konke ejwayelekile: airbag abagibeli angaphambili, futhi, yebo, ngoba umshayeli. Uma umuntu unquma ukuba ngumnikazi we ukucushwa esiphezulu ke imoto yakhe kuyoba kwesihenqo airbag kanye isihlalo ibhande pretensioners. Kulezi zinguqulo "Toyota" zisekhona imithwalo Imingcele, ISOFIX entengo nesihluthu inertial.
Lesi sizukulwane izimoto ihlolwe izikhathi eziningi nokuvivinywa okuhlukahlukene ukuphahlazeka. Imiphumela yalezi zivivinyo awakaze ngezansi izinkanyezi ezine. Nakuba umshini ngokuvamile wathola "emihlanu" njengoba izilinganiso. Futhi alolu sokuphepha kuyinzuzo ayisihluthulelo zalolu hlobo locingo. Nokho, omunye ethile kuye kwaphawulwa. Futhi ukuntula nokuphepha egijima phezu kwabantu. Abahamba ngezinyawo ezimweni ezinjalo azibona lucky.
Wokucwebezelisa imoto ngezandla zakho: zonke ezicashile
"Skoda Superb" inqola: izithombe, izici, ukubuyekezwa abanikazi
Car "Volvo 440": ezibekiweko lobuchwepheshe, izincazelo kanye nokubuyekeza
Recipe pizza Puff khekhe - Classic yesimanje
Intaba Byrranga ukuphakama, umlando kanye nezithombe. Ukuphi ezintabeni Byrranga
Buyisela idatha kusuka imemori khadi kungenzeka!
Ukugeleza Material - kungcono ... ukugeleza impahla kanye nezici zayo
Coloured wokwakha ingxube. Izinzuzo ukusetshenziswa kanye nezici
Isandiso endlini luhlaka (isithombe)